ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း: မိချောင်းမျက်ရည် (ကဗျာရှင် နေရဲနီ) ဒီမိုဝေယံ
မိချောင်းမျက်ရည် (ကဗျာရှင် နေရဲနီ) ဒီမိုဝေယံ
Thursday, July 12, 2012 ဒီမိုဝေယံ
အာဏာရှင် အတ္တသမားကြီးကို လည်ပင်းနင်းပြီး
ငတ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝတွေက
လည်ပင်းညှစ်ပြီး သူတို့ အတင်းရယူသွားတယ်။
ဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်း ဖောက်တဲ့လမ်းပေါ်မှာ
လယ်သမားတွေရဲ့ ထမင်းငတ်တော့မယ့် ဆူဆူညံညံ အသံတွေက
ယခုတဖန် မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်
စိုးရိမ်စွာ သတိပေးလိုက်ပါတယ် တဲ့
ရေနစ်နေတဲ့ သတ္တဝါကို ကယ်တော့မလိုနဲ့
အောက်မှာ မိကျောင်းမျက်ရည်ကျပြတဲ့ သတင်းကို ဆက်ဖတ်နိုင်ပါတယ်..။
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲ တရုတ် သတိပေး
ဇူလိုင်လ(၂)ရက်နေ့ VOA (မြန်မာပိုင်း) သတင်း
မြန်မာနိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီရေး အပြောင်းအလဲတွေဟာ "အလျင်စလို" လုပ်လို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ တရုတ်နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာက သတိပေး ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာတွေ အားလုံးကို ဒီမိုကရေစီ ဆိုတဲ့ အရာတခုထဲနဲ့ ဖြေရှင်းလို့ မရနိုင်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက အရပ်သားတပိုင်း အစိုးရသစ်က တိုင်းပြည်မှာ မကြုံဘူးသေးတဲ့ အနာဂတ်ကို ဖန်တီး ပေးမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ပြုလုပ်နေတဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကွန်မြူနစ်ပါတီက ထုတ်ဝေတဲ့ Global Times ရဲ့ သုံးသပ်ချက် ဆောင်းပါးမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
အနောက်တိုင်းဆန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပုံစံဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အန္တရာယ်ကြီးမားတယ် ဆိုပြီးတော့လည်း သတိပေး ရေးသားထားပါတယ်။ အလျှင်စလို ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေ ပြုလုပ်တာဟာ အစွန်းရောက်သူတွေကို အားပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မကြာသေးခင်က တိုင်းပြည် အနောက်ခြမ်းမှာ လူတွေ ဒါဇင်နဲ့ချီ သေဆုံးခဲ့ရသလို ထောင်နဲ့ချီပြီး အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင်တွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကြား ဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ အဓိကရုန်းကို ဥပမာပေး ရေးသားထားပါတယ်။
"ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ၉၆ ပါး ရောဂါ ပျောက်ဆေးကြီး မဟုတ်ဘူး" ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တပ် ရေးသားတဲ့ ဆောင်းပါးမှာ အနောက်နိုင်ငံတွေက ဒီမိုကရေစီ စံနစ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် တော်တော် သြဇာ လွှမ်းမိုးနေကြောင်း မြန်မာနိုငငံ အနောက်ခြမ်းမှာ ဖြစ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်မျိုးဟာ ဆိုးဝါးလာနိုင်သလို ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ အခြေအနေ ဆိုက်ရောက်နိုင်ကြောင်းလည်း သတိပေး ရေးသားထားပါတယ်။
Posted in: ကဗျာ, နေရဲနီကဗျာများ
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 2:06 AM
လယ်သမားတွေ ထွန်တုံးတိုက်ပွဲ စပြီ
ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်း တတိယအကြိမ် ထောက်ပံ့...
ပြည်ထောင်စု အနာဂတ် အတွက် တိုင်းရင်းသားများ စည်းလုံ...
Who Kill Aung San? ဗိုလ်ချုပ်ကို ဘယ်သူ လုပ်ကြံသတ်ြ...
သမိုင်းရဲ့ အရိပ်မဲတွေအောက်က ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့----...
ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ဖွဲ...
စစ်တပ်က လယ်ထွန်မင်္ဂလာပွဲ ဆင်နွဲမည်
8888 ကျောင်းသားများ ကချင်ပြည်နယ်သို့၂ဖွဲ့ ခွဲကာသ...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဂျပန်နည်းပညာက အထောက်...
Humans attacked in westen Burma 2012
အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး ရန်ကုန် ရောက်၊ ၊ နေပြည်တော် အြ...
ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံ အခြေစိုက် အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်း...
တိရစ္ဆာန်လေးများအကြောင်း ၂ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်..။